I-Serene Hideaway Endaweni Yomlando - I-Airbnb
I-Serene Hideaway Endaweni Yomlando
Charlotte, North Carolina, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-LaQwiesha
U-LaQwiesha Ungumbungazi ovelele
Ikamelo elinendawo yokungena ehlukile elixhumene nekhaya lethu. Ikamelo lokulala/indlu yokugezela esanda kulungiswa enamafasitela amaningi avumela ukukhanya kwemvelo kuhlunge. Isendaweni ephakathi nendawo, ukufinyelela okusheshayo emgwaqeni omkhulu 485, 85 no-147. Singaphansi kwemizuzu engu-15 yokushayela ukuya e-Northlake Mall, e-Target, nasezitolo zokudlela eziningana nemizuzu engu-20 yokushayela ukuya e-Concord Mall, e-Ustown Charlotte, naseSikhumulweni Sezindiza.
Asikho Isivakashi Esengeziwe Akukho
Azikho Izilwane Ezifuyiwe
Indawo ethokomele enezihlahla ezinkulu nezinyoni eziphithizelayo. Ungabona izula noma amabili ngezikhathi zasekuseni. Uma usungenile, unekamelo elivulekile elinamafasitela amakhulu angu-6, umbhede omkhulu, ideski, i-wifi, i-mini-fridge, i-microwave, itafula le-bistro negumbi lokugezela eline-shower esesitayeleni (akukho ubhavu). Sikunikeza iziphuzo nokudla okulula.
Sinesistimu ye-Roku ye-TV. Ungangena ku-akhawunti yakho ye-Netflix, i-Hulu, ne-Pandora yokuzijabulisa.
Sicela ungethuki uma ubona inja kamakhelwane wethu. Unobungane obukhulu futhi ungemuva kocingo olungabonakali.
Itholakala kwesinye sezifunda zomlando wase-Charlotte, indawo yethu enokuthula nokuthula igcwele amakhaya amadala amahle, ngayinye ivulekile. Itholakala kalula e-Latta Plantations, e-G Graham Graham Library, e-US Whitewater Center.
Sizotholakala ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo ongaba nayo. Ukungena ngekhiphedi ekamelweni kuvumela ukungena okulula futhi asikho isidingo sokukhathazeka ngokhiye. Iziqondiso eziningiliziwe zizokwabelwa ngesikhathi sokungena emgqeni.
ULaQwiesha Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Charlotte namaphethelo